Burcad badeeda TV Shakiga ee Malmo kasbadeen malaayiin badan - Android TV - Android TV News
Home · Android TV · Burcad badeeda TV Shakiga ee Malmo kasbadeen malaayiin badan
Burcad badeeda TV Shakiga ee Malmo kasbadeen malaayiin badanBilayska ayaa ku garaacday tisdagsmorgnen in ay shirkadda ee Malmö oo xiray saddex qof. Waxay looga shakisan yahay jebinta copyright.
Saddexda nin, da'doodu u dhaxayso 28 iyo 55 sano, wuxuu lahaa howlgalka in ay keenaan in channels TV shisheeye ka Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. Waxa ay soo baakadeeyey channels iyo khaldaan iyaga wariyeen in macmiisha gaarka ah.
- Baadhitaan ayaa ku bilaabatay iyadoo shirkadda TV, taas oo leh xuquuqda in ay sii daayaa, sidaana waxa shirkadda. saddex ayaa haatan xabsiga looga shakisan yahay dambiyada ka dhanka ah sharciga copyright iyo kelmadaha sharciga, ayaa sheegay baaraha, xeer Henrik Rasmusson.
La socday tan iyo 2013
Shirkadda in waddaa nimanku u turjumay omring 50 milyan oo karoon sannadkii sannadihii la soo dhaafay. Xeer ilaaliyaha ayaa qaba in ay Raaxaynay xad gudub ku ah sharciga copyright tan iyo bishii September, 2013.
- Our fikrad waa in shirkadda ayaa kor of a boqol oo kun oo macaamiisha, ayuu yidhi Henrik Rasmusson.
Macmiil TV Company iibin dhex sanduuq la magaca ATN. Waxaa jira channels caan ah in ay adag tahay si aad u hesho iyada oo distributors Swedish. Kiiska of sports, madadaalada iyo news.
- Waxaan ka shakisan tahay in shirkadda ayaa Decoded iyo qaybiyey wadar ahaan ku dhowaad 2,000 channels ka inta badan Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. Waxay ku lug leedahay ganacsi oo dhamaystiran, ayuu yidhi Henrik Rasmusson.
Waa markii ugu horeysay oo qof oo ku nool Sweden ayaa la xiray shaki la noocan ah dembi.
- Waxa uu hore kelmadaha iyo wixii la mid ah, laakiin waa markii ugu horeysay ee wax weeraryahan khaldaan macaamiisha internetka, ayuu yidhi Henrik Ramusson.
Saddex qof, oo ay ku jiraan milkiilaha shirkadda, waa xabsi. dadka dheeraad ah la xiriir shirkadda, waa la maqlay Tuesday by booliska. The goobta halkaas oo shirkaddu ay ku shaqeeya ayaa baaritaan iyo qalab farsamo ayaa la qabtay.
- Waxaan sameyn doonaa more su'aalo qoto-dheer ka mida tuhmanayaasha iyo maraan qalabka oo dhan. Waxay qaadan doontaa dhowr maalmood ka hor waxaan ku ururiyey cadaymaha, ayuu yidhi Henrik Rasmusson.
Xeer Lars Engström, oo wakiil ka ah shirkadda qabtay mulkiilaha, ayaa sheegay in ciyaaryahanka uu wakiilka u beenisay anklagaelserna iyo in shirkadda uu leeyahay oo dhan liisanka loo baahan yahay in la qaybiyo channels ah.
Macaamiisha ma denbiyo
The macaamiisha kuwaas oo iibsaday xirmo channel ee shirkadda ayaa helay qalab qaab sanduuq. Tan iyo channels ay horey u Decoded hor inta aan la huleeshay internet-ka, oo macaamiisha waxaa uu gelayaa dembi lahayn markii ay arkaan.
- My qiimaynta waa in macaamiisha ma samayn wax dambi ah, ayuu yidhi Henrik Rasmusson.
Haddaan macaamiisha Decoded signal ee guriga, waxa uu noqon lahaa dambi.
11.11.2016. 20:09	Categories